Izindaba - I-China isibe ngumkhiqizi wezingubo omkhulukazi futhi othumela izinto kwamanye amazwe
Kusukela ukungena kweChina ku-WTO, izindwangu nezingubo sekube yingxenye ebalulekile yokuthunyelwa kweChina emazweni angaphandle. Kule minyaka eyishumi edlule, ngokuqedwa kancane kancane kohlelo lwezabelo ezithunyelwa kwamanye amazwe, ukuthunyelwa kwezimpahla zaseTshayina, izindwangu nezimpahla zokugqoka kunendawo yangaphandle evulekile. Izici ezithandekayo zemvelo zangaphandle zinikeza izimo eziyisisekelo kakhulu zokwenziwa kwemboni yezingubo zaseChina emazweni omhlaba. Ngalesi sizathu, imboni yezindwangu nezingubo yaseChina enezindleko zabasebenzi kanye nezinzuzo zokuhlinzekwa kwempahla eluhlaza, ithuthukisa ukuncintisana kwamazwe omhlaba. Selokhu iChina yajoyina i-WTO ngo-2001, inani lokuthunyelwa ngaphandle kwemikhiqizo yezindwangu nezingubo zaseChina lenyuke ngaphezu kwezikhathi ezine. Njengamanje, iChina isibe ngumkhiqizi wezimpahla zokugqoka omkhulu futhi othumela izinto kwamanye amazwe emhlabeni.
Ngokwe-data yamasiko, ngonyaka we-2019, inani elithunyelwe ngaphandle laseChina lezindwangu nezingubo lalingama-US $ 271.836 billion, ukwehla konyaka ngonyaka ngo-1.89%. Phakathi kwazo, inani eliphelele lokuthunyelwa kwezindwangu lalingu-US $ 120.269 billion, lenyuka ngo-0.91% unyaka nonyaka. Ukuthengiswa kwangaphandle kwezimpahla kufinyelele kuma-US $ 151.367 billion, kwehla ngo-4.00% unyaka nonyaka. Amazwe amakhulu okuthunyelwa kwendwangu nezingubo yiJapan neChina.
Ngokombono wohlaka lwezimpahla ezithunyelwa ngaphandle, ukuthunyelwa kwezingubo ngonyaka wezi-2019 kunqwabelene ngamaRandi ayizigidi eziyizinkulungwane eziyi-151.367, lapho okwembethe khona izingubo kwakungamadola ayizigidi eziyizinkulungwane ezingama-60.6, ukwehla konyaka ngama-3.37%; izingubo ezilukiwe kwakungamadola ayizigidi eziyizinkulungwane ezingama-64.047 zamadola aseMelika, ukwehla konyaka nonyaka ngama-6.69%.
U-Cao Jiachang, uMongameli we-China Textile Import and Export Chamber of Commerce, uthe kwi "2020 8th China and Asia Textile International Forum" ebibanjelwe eShanghai muva nje, ukuthunyelwa kwamaski nezingubo zokuvikela kukhuphuke ngokushesha, okuholele ekukhuleni kokuthekelisa okuphelele yendwangu nezingubo. Kodwa-ke, imakethe yamazwe omhlaba ivilapha, ukwesulwa nokuhlehliswa kwama-oda ejwayelekile wezindwangu nemikhiqizo yezingubo kubucayi, ukubuyiswa kwama-oda amasha kuhamba kancane, futhi okulindelwe esikhathini esizayo akuqinisekile. Kwesikhathi esizayo, izindwangu nezingubo kuthunyelwa kwamanye amazwe kunezinto zokuvikela ubhubhane ezisazobhekana nesimo esingesihle sokwehla kwesidingo kanye nokushoda kwama-oda.
Kusukela kwikota yesibili yalo nyaka, ukuthunyelwa kwendwangu nezingubo eChina kutholakele kancane kancane emgodini. Kuqhutshwa ukuthunyelwa kwezinto zokwelapha eziwumqedazwe ezifana namaski, kusukela ngoJanuwari kuya ku-Agasti, ukuthunyelwa kwendwangu nezingubo eChina kufinyelele kumaRandi ayizigidi eziyizinkulungwane ezingama-187,41, ukwanda ngo-8.1%, okuthe ukuthunyelwa kwendwangu kwamanye amazwe kwakungu-US $ 104.8 billion, ukwanda ngo-33.4%; kanti izimpahla ezithunyelwa ngaphandle zingama-US $ 82.61 billion, ukwehla ngo-12.9%.
Ukuthunyelwa kwempahla yokuvikela ubhubhane njengamamaski nezingubo zokuvikela kukhuphuke kakhulu. Ngokusho kukaCao Jiachang, iChina ithumele omaski abayizigidi eziyizinkulungwane eziyi-151.5 kanye nezingubo eziyizigidi eziyizinkulungwane eziyi-1.4 zokuvikela kusukela ngoMashi 15 kuya kuSepthemba 6, kanti ngokwesilinganiso kuthunyelwa kwamanye amazwe cishe amaski ayisigidigidi esi-1, asekela ngokuqinile ukuvimbela nokulawula ubhubhane lomhlaba jikelele. Ezinyangeni eziyisikhombisa zokuqala zonyaka, ukuthengiswa okuphelele kweChina kwamamaski nezingubo zokuzivikela kwakucishe kube yizigidigidi ezingama-40 zamadola aseMelika kanye namaRandi ayizigidi eziyizinkulungwane eziyisikhombisa ngokulandelana, kukhuphuke izikhathi eziyishumi esikhathini esifanayo ngonyaka odlule. Ngaphezu kwalokho, ukuthunyelwa kwezindwangu ezingalukiwe nezindwangu ezingalukiwe kukhuphuke ngama-118%, nakho obekuhlobene nokwanda kwezindwangu ezingalukanga ezithunyelwa ngaphandle.